Fanitsiana lalàmpanorenana : kolikoly ny fiara 4 x 4 ho an’ny depiote amin’ny fotoana farany | NewsMada
Fanitsiana lalàmpanorenana : kolikoly ny fiara 4 x 4 ho an’ny depiote amin’ny fotoana farany
Hiverina hanohy ny fivoriana ara-potoana faharoa ireo depiote amin’ny herinandro ambony. Resabe hatrany ny fahazoana fiara 4 x 4 hoe kolikoly? Famakafakana…
Mbola mahabe adihevitra ny fahazoan’ny solombavambahoaka fiara tsy mataho-dalana na tsia. Miseholany hatrany izany isaky ny misy raharaha mafanafana ratsy eny anivon’ny Antenimierampirenena. Teo, ohatra, ny fampiatoana ny filohan’ny Repoblika amin’ny asany, 3 jolay 2015, hoe noho ny tsy fahazoana fiara.
Amin’izao 15 volana tsy hahataperan’ny fe-potoam-piasan’ny Antenimierampirenena izao, vao mainka mahabe resaka ny amin’izay fahazoan’ny solombavambahoaka fiara izay. Na toy inona fanazavana sy fanamarinan-tena, alaim-panahy ihany ny maro hanombana fa mamofompofona kolikoly ny raharaha.
Lazaina, ohatra, fa haloan’ny solombavambahoaka tsikelikely ny fahazoana izany fiara izany, fa tsy maimaimpoana. Nandritra izay telo taona mahery izay, na nisy mandrakariva aza ny fangatahana na fitakiana, tsy nisy firy izay resaka izay. Nahoana no efa hifarana ny fe-potoam-piasana vao hoe haloa tsikelikely?
Tsy tongatonga ho azy ny fahazoana fiara
Amin’izao fikasan’ny filohan’ny Repoblika hampanao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana izao vao hoe hiaraka hahazo fiara tsy mataho-dalana amin’ny fandoavana izany tsikelikely ireo solombavambahoaka? Tsy tongatonga ho azy izany. Andrasana kendry tohina toy izany ny fiara hoe haloa tsikelikely.
Hahaenjika ny fandoavana tsikelikely ve ireo solombavambahoaka efa tsy nanao izany nanomboka tamin’ny nanombohany ny asany? Tsy fantatra raha mbola ho tafaverina amin’ny toerany na tsia amin’ny fe-potoam-piasana manaraka. Ny fanjakana foibe no hanao antoka amin’izany? Eo no tsy mazava, mamofompofona ratsy…
Efa nahabe resaka hatrany ny amin’ny fifandraisan’ny fahefana mpanatanteraka amin’ireo solombavambahoaka sasany hoe manohana fitondrana, na mpivadibadika, na manao takalon’aina amin’izany. Tena tsy misy kolikoly? Mahagaga fa tsy avelan’ny birao maharitra hanao fanadihadiana ifotony ny Bianco hatramin’izay.
Hanao ahoana indray àry ny resaka fiara tsy mataho-dalana amin’izao fivoriana ara-potoana faharoan’ny Antenimierampirena izao? Hibahan-toerana ny fanitsiana lalàmpanorenana sy ny fahazoana fiara, ary hoketsaketsaina sy zara fa vita amin’ny fotoana farany ny fandaniana ny lalàna mifehy ny tetibola, taona 2018?